The ji akwa
WPC okooko osisi
Freestanding Electric ji akwa
Yi ire ọkụ Home okpomọkụ
Electric ji akwa PCBA
2018 New abịa Phone APP Control okpomọkụ Adjus ...
Intelligent Electric ji akwa 60 "Large Size ...
Marble atụ ihe e ji akwa Hand Wapụtara Natural White M ...
Ire ọkụ Settings Sideline Electric ji akwa Ziri Ezi ...
Wood plastic n'ala
Mbupu Okwu: FOB Shenzhen Ịkwụ Ụgwọ Okwu: TT / LC MOQ: 100 Unit Price: biko kpọtụrụ anyị Size: ahaziri Product DescriptionThe ọhụrụ osisi-plastic ihe onwunwe bụ ụdị nke gburugburu ebe obibi aesthetic ihe onwunwe, mere nke plastic na cellulose (achara powder, ahịhịa ntụ ntụ, nkume powder, osisi powder) na a pụrụ iche process.Its mmiri absorption bụ n'okpuru 2/1000 nke corrosion na-eguzogide bụ ihe karịrị ugboro iri nke osisi. Product e ji mara * Waterproof, mmiri àmà, dịghị mgbasa, ọ dịghị deformation, ọ dịghị cracking, n ...
Mbupu Okwu: FOB Shenzhen
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: TT / LC
Unit Price: biko kpọtụrụ anyị
The ọhụrụ osisi-plastic ihe onwunwe bụ ụdị nke gburugburu ebe obibi aesthetic ihe onwunwe, mere nke plastic na cellulose (achara powder, ahịhịa ntụ ntụ, nkume powder, osisi powder) na a pụrụ iche process.Its mmiri absorption bụ n'okpuru 2/1000 nke corrosion eguzogide bụ karịrị iri ugboro nke osisi.
Product e ji mara
* Waterproof, mmiri àmà, dịghị mgbasa, ọ dịghị deformation, ọ dịghị cracking, ọ dịghị ire ere. O nwere ike ịbụ usedin ndị dee mmiri gburugburu ebe obibi, ebe omenala osisi na ngwaahịa ike Bu eji.
* N'akụkụ pests mgbochi, mkpu eguzogide, corrosion na-eguzogide, mgbochi ịka nká, ogologo ọrụ ndụ.
* Ọ dịghị mmetọ, ala carbon, gburugburu ebe obibi enyi na enyi, ike ịzọpụta na emission Mbelata.
* The ọkụ na-retardant ọkwa bụ B1.It pụrụ ịkwụsị ọkụ na-adịghị amị anyharmful gas.
* Good plasticity, yi, dịghị mfe ịjụ oyi, osisi aka, nwere ike n'ụzọ zuru ezu na-egosipụta personalizedmodeling na àgwà.
* O nwere ike kpọgidere, Planed, sawed, gbapuru na mfe ma dị mfe na-ewu na installationsteps, na-azọpụta oge na-eri.
* Energy-azọpụta, recyclable, na akara na mba kwado mmepe iwu na chọrọ.
Next: Wood plastic ifuru igbe
Usekwu na-bụ-eji maka kpo oku na mma
XinYingXin Electronics Technology ewebata elu na ngwá na-arụpụta iche iche iche iche nke elu-tech ngwaahịa. Na magburu onwe ya mma na ezi aha, anyị na ngwaahịa ndị na-ewu ewu na Europe, North & South America, Australia, Middle East na East Asia. E wezụga, Anyị guzobere ezi azụmahịa mmekọrịta na ụwa ma ama ụlọ ọrụ dị ka Walmart, n'ụlọ ebusa, Canada Taia, MENARDS ...... Anyị mmepụta ụlọ ọrụ na-adịru gafee ebe n'elu 30000sqm na-enwe kwa afọ na mmepụta nke electric usekwu ichekwa otu nde iberibe. E wezụga nke a, anyị na-ọma nwetara mba quality asambodo nke ISO9001, GS, OA, EMC, CSA, SAA na FSC
N'ijikọta Building brik
Wood brik N'ihi Building
Wood Ọgwụ na ịkpụzi
Wood Dị Plastic
Wood Nkedo Suppliers
Wood Plastic mejupụtara
Wood Plastic mejupụtara ngwá ụlọ
Wood Plastic mejupụtara Ọgwụ na ịkpụzi
Wood Plastic mejupụtara Manufacturers
Wood Plastic mejupụtara Suppliers
Wood Igwu Pool oche
Osisi na-esi anwụde Suppliers
Wpc Board ngwá ụlọ
Wpc ngwá ụlọ
Wpc Ihe Price
Wpc Raw Ihe
Wpc Wood Plastic mejupụtara
Wpc Wood Plastic mejupụtara Price
Wood plastic Eco ụlọ
Ebe obibi osisi plastic ụlọ
Adress: 7th n'ala, n'ebe ọwụwa anyanwụ ụlọ B, weihuada ulo oru ogige, longhua district, Shenzhen